बाबुराम भट्टराईको प्रमुख रणनीतिक सल्लाहकारमा प्रशान्त सिंह « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
बाबुराम भट्टराईको प्रमुख रणनीतिक सल्लाहकारमा प्रशान्त सिंह
ओएस नेपाल , जापान , एच.बी ताम्राकार
३ कात्तिक । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको केन्द्रीय कार्यालयको कार्यविभाजन हेरफेर भएको छ । बुधबार बसेको विशेष राजनीतिक समिति बैठकले नयाँ कार्यविभाजन गरेको हो । बैठकले लाई पार्टी संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको प्रमुख रणनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ ।
त्यसैगरी केन्द्रीय कार्यालयको संयोजकमा डा. केशवमान शाक्य र सह-संयोजकमा प्रल्हाद लामिछानेलाई जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै विद्यार्थी संगठनको उत्प्रेरकको जिम्मेवारी राजु नेपालले पाएका छन् ।
प्रमुख रणनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएका सिंह हार्वड विश्वविद्यालय, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगायतका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुबाट प्रशिक्षित छन् । उनले यसअघि नै नेपाल पर्यटन बोर्डको निर्देशक, विश्व बन्यजन्तु कोष, नेपालको निर्देशक लगायतका पदहरुमा रहेर कार्य गरिसकेका छन् ।
त्यसैगरी केन्द्रीय कार्यालय संयोजक शाक्य पूर्वमन्त्री (विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण) हुन् । उनले पनि धेरै प्रतिष्ठित संस्थाहरुमा कार्यकारी पदमा रहेर काम गरिसकेका छन् ।
केन्द्रीय कार्यालय सह–संयोजक लामिछाने पूर्वसभासद् (प्रत्यक्ष निर्वाचित) हुन् । त्यस्तै उनी नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको मकवानपुर जिल्ला संयोजकको रुपमा काम गरिसकेका छन् भने उनीसँग विभिन्न व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेको अनुभव पनि छ ।
कार्ययोजना निर्माण कार्यदलहरु गठन:
बैठकले मंसिर ५ गतेदेखि हुने केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठकको निम्ति निम्नानुसारको कार्ययोजना कार्यदलहरु पनि गठन गरेको छ:
क) वैचारिक–राजनीतिक तथा साँस्कृतिक अभियान कार्ययोजना
संयोजक: डम्बर खतिवडा
सदस्यहरु: खिमलाल देवकोटा, करिष्मा मानन्धर, अमरध्वज लामा
संयोजक: देवेन्द्र पौडेल
सदस्यहरु: केशव दाहाल, रामकुमार शर्मा, कल्पना धमला, पासाङ शेर्पा, कुमार पौडेल, देवराज भारद्वाज
संयोजक: गंगा श्रेष्ठ
सदस्यहरु: देवेन्द्र पराजुली, रामरिझन यादव, ऋषभदेव भट्टराई, लिली थापा, दुर्गा न्यौपाने, सावित्री लामा, दीपक भट्टराई
संयोजक: रामेश्वर खनाल
सदस्यहरु: प्रशान्त सिंह, नवराज सुवेदी, सुनिल खड्का
ङ) उत्पादन तथा रोजगार/स्वरोजगार कार्ययोजना
संयोजक: केशवमान शाक्य
सदस्यहरु: लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, जनकराज शाह, प्रदीपमान तुलाचन, प्रेम तामाङ
संयोजक: वामदेव क्षेत्री
सदस्यहरु: सविना अर्याल, अशोक श्रेष्ठ, नाथुप्रसाद चौधरी
अझै पनि छ अन्धविश्वास उस्तै ! छोरा जन्माउन कोशिस गर्दा गर्दै पुनले गरे छवटी श्रीमतीसँग बिहे
स्वर्गीय श्रीमती यशोदाको तस्विर हेर्दै मन बुझाउँदै मदनकृष्ण, तस्विर देखेर धेरै बने भावुक